Sunday September 30, 2018 - 17:18:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hey’adda Maareynta Masiibooyinka dalka Indonesia oo maanta barqadii war kasoo saartay halka ay marayaan howllaha gurmadka ee lagu baadi goobayo kumanaan dad ah oo burburka ku hoos jira ayaa sheegtay In howsha aysan ahayn mid sahlan, daqiiqad kastaana la filan karo in dhimashada ay sare usii kacdo.
Isbitaallada caafimaadka ayaa lagusoo waramayaa in dadka dhaawacyada qabaa ay buux dhaafiyee,kuwaas oo gaaraya kumanaan qof.
Madaxweyne ku xigeenka Dalka Indonesia ayaa isna ka dhawaajiyey in dhul gariiriki iyo Sunaamigii ku dhuftay Jaziiradda Sulawesi, khasaaraha ugu badan uu gaarsiiyey magaalooyinka Palo iyo Dongala, inkastoo dhanka magaalada Dongalo ay si daran ugu saamowday ilaa iyo hadana xiriirkeedu uu yahay mid aad u liita.
Dadka lasoo badbaaday iyo dadka dhintay ee kujira diiwaanka Dowlada Indonesia waxa ay u badan yihiin dadki ku dhaqna caasimada gobolka Palo, walina wax war ah oo dhameystiran lagama hayo 300 Kun oo qof oo ku dhaqna Magaalada Dongalo sida ay sheegayaan saraakiil sar sare oo katirsan xukuumada Indonesia.
Dongalo ayaa aad ugu dhaweyd goobta uu dhul gariirku ka dhacay, sidoo kalena magaalada waxaa ku dhuftay Mowjado Sunami ah oo dhirirkooda lagu qiyaasay ilaa lix Mitir inay gaarayeen, waxaana la filayaa in tirada dhimashada ay ka badan doonto inta laga diiwaan galiyey magaalada Palo oo ah caasimada gobolka Sulawesi.
Hey’ada la socodka dhul gariirada wadanka Indonesia ayaa ka dhawaajisay in Awooda uu lahaa dhul gariirka hada ku dhuftay wadanka iyo Dabka uu bixinayaba ay ka awood badneyd wax ka badan 200 jeer Nuclearki Mareykanku ku dhuftay Magaalada Herushima oo katirsan wadanka Japan intii lagu guda jiray dagaalki labaad ee dunida.
Wadanka Indonesia ayaa hada lagaliyey xaalad degdeg ah, waxaana laga cabsi qabaa in dhul gariiro hor leh ay ku dhuftaan jaziiradaha wadankaas, dadkuna waxa ay ku sugan yihiin goobo ka baxsan dhismayaasha dhaadheer si hadii dhul gariir uu dhoco aysan guryaha ugusoo dumin.
Warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegeysa in tirada dadka ku maqan magaalada Palo oo kaliya ay dhantahay 335,000 oo qof, taas oo ka dhigan in xitaa hadii ay bad qabaan ay ku hoos jiraan burburka guryaha.
Sidoo kale Waxaa jiro boqolaal dad ajnabi ah oo usoo daawasho tagay mahrajaan ka dhacayey xeebta magaalada Palo maalinki Jimcaha, kuwaas oo tiro kamid ah ilaa iyo hada lala,yahay sida ay shaacisay wazaarada arimaha dibada wadanka Indonesia.
Afhayeenka u hadlay hey’ada Maareynta Masiibooyinka ayaa warbaahinta u sheegay in dadka ku dhaqan jazeeradaha ay digniin u direen ka hor inta uusan dhul gariirku dhicin, sidoo kalena mowjadaha hirarka Sunamiga aysan soo gaarin xeebta, balse dadku ay dhayelsaden, taasna ay keentay inay noqdaan dadki ugu badnaa ee waxyeelado ay saameysay.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in Mowjadaha Sunamiga ay ahaayeen kuwa layaab leh oo ku socda xawaare aan horey loo arag, saacadiina ay jarayeen wax ka badan 800Km, waxa uu tilmaamay inay horey usii qaateen gaadiid, geedo, guryo iyo wax kasta oo ka hor yimid, ilaa markii danbe ay ku biya shubteen xeebaha woqooyi ee wadanka.
Wasaarada caafimaadka wadanka Indonesia ayaa amar ku bixisay in gurmad caafimaad oo deg deg ah lala gaaro Jazeerada Sulawesi, xilli isbitaaladii magaaloyinka ay masiibadu ka dhacday ay shaqada gabeen, dadkana lagu daweynayo wadooyinka.
Qof kamid ah dad ku dhaqan magaalada Palo ayaa warbaahinta u sheegay, in dadka intoodii badbaaday aysan heysan, wax ay cunaan, wax ay cabaan iyo dawooyin la siiyo dadka dhaawacyada la il daran, inkastoo warar soo baxayaa ay sheegayaan in goor danbe oo manta ah ay jazeerada gaareen ilaa 8 diyaarad oo ah kuwa loo yaqaan c130 ee xamuulka ciidanka qaada, kuwaas oo hawada sare dadka ugasoo tuurayey cunto, biyo nadiif ah iyo dawooyin.
Madaxweynaha Dalka Indonesia Joko Widudu ayaa isna lagusoo waramayaa in goor danbe oo manta ah uu gaaray jazeerada Sulawesi oo ah halka ay dhul gariirka iyo Sunaamiga ku dhufteen, isagoona waxa meesha ka dhacay ku tilmaamay Masiibo Qaran.
Dhimashada ka dhalatay Duufaanta Tusunaami Ee Wadanka Indonesia oo gaartay 373 qof.